Flow woluvo, ABS woluvo, Truck woluvo - Hehua
I-HEHUA yingcali yeshishini lokuvelisa kwimveliso ye-ABS sensors, isivamvo sokuhamba komoya, isivamvo secrankshaft, isivamvo seCamshaft, isivamvo setraki, i-EGR Valve. Ngokukodwa nika izisombululo zobungcali zeemoto zombane kubathengi basekhaya nakwamanye amazwe abaziwayo. Indawo ephambili yentsebenziswano yintengiso ye-china OE kunye ne-OEM yaphesheya, kwimarike ye-OES.
Ukubonelela ngenkonzo yokuthenga enye kunye nokuthengisa. Iimodeli zoluvo zingaphaya kwezinto ezingama-3000.
Izinto ezinokubakho kunye nenxalenye, ukhetho oluzenzekelayo, inkqubo yolawulo, kunye nolawulo lomgangatho ziyafana ngokupheleleyo nomgangatho we-OE.
Iminyaka eli-15 yeqela lenzwa ye-R & D kunye neqela lobuchwephesha, ilabhoratri ezimeleyo.
Sineenkonzo ezilungileyo emva kokuthengisa ukuqinisekisa ukuba iimpahla zithunyelwa kubathengi bethu ngexesha, kwaye sinesiqinisekiso semigangatho emi-2.
Uvavanyo lwe-ABS HH-ABS1021
ABS woluvo HH-ABS1020
Uvavanyo lweABS HH-ABS1019
Jeep Crankshaft woluvo, Ckp Crankshaft Position woluvo, Ubunzima bokuhamba koMoya oMkhulu, Isixhobo sokuhamba soMoya seDodge, Mercedes-Benz Camshaft woluvo, Bmw Crankshaft woluvo,